Yintoni entsha evela kuJo Nesbø. Ekwindla Indlalifa kunye ... iya kubuya uHarry Hole | Uncwadi lwangoku
Yintoni entsha evela kuJo Nesbø. Ekwindla Indlalifa kwaye… izakubuya uHarry Hole
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi, Inoveli emnyama
Ifoto kaJo Nesbø: (c) uDebra Hurford Brown.
Ipharishi ebanzi yabathembekileyo Jo Nesbø ndisenethamsanqa kulo nyaka. Ngo-Epreli sasinayo Macbeth nangaphakathi Oktobha iyaqhubeka nokuthengisa Indlalifa (inguqulelo -okanye isigqibo somhleli- simahla kwisifundo sokuqala, Sonnen, zilula njengoNyana). Ndizifundele kumhla wakhe kwaye Ndiyincoma ukususela ngoku.
Kwaye kunyaka olandelayo, kwi julio, ukubuya komlilo (kuba kufuneka kutshise kuphela) ikhomishina UHarry hole kwibali leshumi elinesibini, Umzi (Andizami kuliguqulela, emva koko kwenzeka ntoni, kodwa okwangoku kwaye kunjalo Imela). Masibone zingantoni ezi ndaba zimbini kwaye ngethemba lokuba kungekudala bazakupapasha ezinye iinoveli ezimbini ezingekazokuvela eNesbø: Igazi kwikhephu y Ilanga ezinzulwini zobusuku.
Abafundi rhoqo be-Actualidad Literatura kufuneka sele besazi ngam ibali eliyimbali nelothando olunzulu ngalo mgca we-viking, Wayengu-shark wezezimali, i-rocker ephumeleleyo (ebebhowula ihlobo lonke kwezo fjords zomhlaba wakhe) kunye nenkosi yenoveli yolwaphulo-mthetho. Ke ayothusi into yokuba ndilahlekelwe yinjongo yam xa ndithetha ngaye. Apho baya khona ukubonakala kwam kwinto ezayo kunye nento engekhoyo.
1.1 Ingaba ingantoni
1.2 Into endiyifumeneyo
3 Ke ngoko…
Okulandelayo kuya kwintengiso 11 ngo-Oktobha kwaye yinoveli yesibini ezimeleyo emva Izihloko zentloko. Yapapashwa ngo 2014, ke yayilixesha lokuba ndifike ngale ndlela. Kuthekani nge Inguqulelo yesihloko Sele ndiphawule ngayo. Ngamanye amaxesha izigqibo zabahleli zokutshintsha eyokuqala ziyahlekisa, eziya kumbhali, kuba ngubani owaziyo ukuba yeyiphi imigaqo. Ukongeza, kunye no-Nesbø ukuza kuthi ga ngoku babezihloniphile izihloko zabo zokuqala. Ngapha koko…
Umlinganiswa ophambili ngu Sonny lofthus. Ukwiminyaka engamashumi amathathu ubudala kwaye uchithe iminyaka elishumi elinambini yobomi bakhe entolongweni ngamatyala angakhange awenze. Ulikhoboka leheroin ukusukela oko utata wakhe wagqiba ekubeni azibulale Phambi kokuba akhethwe njengepolisa elikhohlakeleyo. USonny wangena engxakini kwaye waphelela ejele.
Apho iba yifayile ye- uhlobo lweguru okanye ukuvuma izono yamanye amabanjwa, kodwa ikwangumbindi wokuqwalaselwa kwabaninzi: amagosa kunye nomphathi, amapolisa, amagqwetha ... Kwaye bonke bafuna ukuba ahlale ejele. Kwaye ngaphezu kwayo yonke, olona lwaphulo-mthetho lubalulekileyo e-Oslo.
Kodwa ngenye imini elinye lamabanjwa laxelela uSonny Into ebaluleke kakhulu ngokusweleka kukayise. U-Sonny uthatha isigqibo sokuba kufuneka evope noba yintoni. Kwaye uya kuyenza kwesinye seziqendu ezibonakala zingenakwenzeka kwaye ziluphawu lwendlu yaseNesbø. Emva koko cinga ngokukhangela ukuziphindezela Ngalo naliphi na ixabiso, ukusuka kwelabafileyo ukuya kunyanzeliso lomthetho oluphezulu, kunye nokuphanda ngakumbi ngokwenzekileyo. Kodwa bayamtshutshisa. Endleleni yabo baya kuwela USimon Kefas, ipolisa eligqala elazi iinyani ezingakumbi ngoSonny, kunye uthando lwentombazana oko kuya kukunceda.
Kukho rhoqo ukungaqiniseki yabafundi abazinikeleyo nabazinikeleyo xa umbhali ophumeleleyo kakhulu onoluhlu lwabalinganiswa ethatha isigqibo soku tshintsha isithathu nomoya ngamanye amabali. Yiloo nto eyenzekayo ngoNesbø. UHarry Hole wakhe uyindalo makhulu kwaye ajikeleze Sele idlulile kwaye iyasibekela (kwaye ngokunokwenzeka izakusibekela, nokuba uNesbø uyayifuna okanye akayifuni) enye into endiyibhalayo.
Kwenzeka kunye Izihloko zentloko (Utshintsho lwelizwi elilandisayo kumntu wokuqala, ibali eliyintsusa ngokukodwa, umlinganiswa ohluke kakhulu ...). Kwaye kwenzeke kwakhona nge Macbeth, que Uye wahlula abathembekileyo bakhe izimvo eziphikisanayo. Iyaqondakala loo nto. Kodwa ke, uMacbeth nguMacbeth kwaye uNesbø akayilungisanga nantoni na, uyixelele ngendlela yakhe. Oku kunokwenzeka kwakhona nge Indlalifa kwaye ezo zisaza kupapashwa, amabali amafutshane kakhulu kwaye zahluke kakhulu kwezo zamapolisa aseNorway.
Ndingatsho kuphela Indlalifa Ndiyayithandaindlela endandibathanda ngayo Izihloko zentloko, Igazi kwikhephu y Ilanga ezinzulwini zobusuku. Into ebonakala ngathi yenye kum ibali elihle kwisitayile sendlu yeNesbø. Ngokujija kwayo, ifayile ye- uluntu Abalinganiswa bakhe, idibene namacebo ayo kunye uthando olunzulu exhasa yonke into. Ewe, UHarry akekho, kodwa akuyomfuneko. Kukho ubomi ngaphaya kwakhe, kukho amabali amaninzi. Kwaye zifanelekile kuba zisuka eNesbø.
Kwakhona, kwaye ngokuthozama Ndingathetha ngokwembono yombhali, amaxesha ngamaxesha kufuneka sitshintshe i-chip, khawuthelekelele izidalwa ezintsha kwaye wenze iihlabathi ezintsha. Kodwa kuyinyani ukuba asinakuhlala sithanda kwaye sinokuphoxeka. Umbuzo kukuba siyicinge. Kwaye aba babhali bamiselweyo banayo ngaphezulu kokucinga. Ewe, ngale ndoda ndinayo icacile.
Kodwa kulungile, akukho mntu ukhathazayo. Ewe, uyabuya, esona siyobisi sikhulu, eyethu uJim Beam: Harry. Kwaye kuyakuba njalo Imela. Nangona kunjalo, ukuba benza okufanayo nakwangaphambili, isihloko siya kuba njalo Ikona, Isiko o Imela.
Unyanisile. NgoJulayi ophelileyo uNesbø wabhengeza ukuba Ishumi elinambini Inoveli kaHarry Hole iya kuphuma 11 de julio de 2019. Kuyabonakala ukuba ekuqaleni sifumana uHarry evuka nge Umbhinqo owoyikekayo negazi ligubungele izandla kunye neempahla. Ingxaki iyanikezelwa, nangona sisazi uHole, asothusi ukuba ungena kwezona zimbi. Umba, okwangoku, kukubona ukuba uNesbø uza kuhamba kangakanani (kwakhona) emva kokwenza esi sidalwa sihambe nobubi obuninzi.
Inyani yile yokuba inoveli nayo iya kubuyisa utshaba oludala nolubulalayo lukaHarry. Kubonakala kungakholeki ukuba ushiyekile emva kwezo sele enazo. Kodwa laa mqondo wobudemon nophazamisekileyo owahlula uNesbø ngokuqinisekileyo uya kuqhubeka nokumenzela okona kubi. Nangona, njengoko abo kuthi abathanda le mpolisa ingafezekanga besazi kakuhle, elona qabane lakhe limnyama liya kuhlala linguye.
Akukho nto, ukulinda kwaye ukuqhubeka nokufunda uNesbø. Ngaphandle kokukrokrela, ngaphandle koloyiko lokuphoxeka, ngaphandle kokukhetha. Ukongeza, yeyona ilungileyo yokwenza olona luvo lufanelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli emnyama » Yintoni entsha evela kuJo Nesbø. Ekwindla Indlalifa kwaye… izakubuya uHarry Hole
Ababali ababalaseleyo kwimbali
Ezona ncwadi zibalaseleyo zenkulungwane yama-XNUMX